कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? जानी राखौँ – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Intresting/कसरी हटाउने अनुहारको कालो पोतो ? जानी राखौँ
सामान्य छालाको कोषलाई Melanocytes भनिन्छ । जुन कोषहरुले मेलानिन नामक तत्व उत्पादन गर्दछन् जसले छालालाई रंग प्रदान गर्दछन् । छालामा मेलानिनको मात्रा ठीक्क भएमा छाला राम्रो देखिन्छ । मेलानिन बढी भएमा कालो देखिन्छ । थोरै मेलानिनको मात्रा निस्केमा छाला पहेंलो नराम्रो देखिन्छ । बढी मेलानिन निस्केमा ठाउँ वरिपरि कालो छाला आएको भनिन्छ । यो बिस्तारै शरीरमा फैलिदै जान्छ ।कालोपोतो हुने कारण